ITUNES: NJEHIE 4005 - ITUNES - 2019
Ndị ọkachamara Shingles bụ abamuru n'efu nke na-enye gị ohere iji tụnyere akụkụ abụọ maka pasent nke ọkụ. Ọ zuru oke maka ndị na-edegharị akwụkwọ novice ndị na-ede ederede dabeere na ngwaahịa ndị a rụchara.
Iji rụọ ọrụ bụ isi nke usoro ihe omume ahụ, ịkwesịrị ibuba ihe abụọ edere ya na ya.
Nsonaazụ nke usoro a bụ windo nke pasent nke ọkụkọ ederede gosipụtara.
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, onye ọrụ ahụ nwere ike ịkọwa ntọala ndị ọzọ tụnyere. Nke a na-agụnye idebe ogologo nke shingle, tụfuo okwu ịkwụsị na mkpado HTML.
Enweghị atụmatụ ndị ọzọ.
Naghị egosipụta nke ederede snippets.
Ya mere, ndị ọkachamara Shingles bụ ọrụ bara uru nke na-arụ ezigbo ọrụ na ọrụ ọrụ onye ahụ nyere ya. Karịsịa maka akwụkwọ edemede novice gụnyere ide edemede.
Download Shingles ọkachamara n'efu
Mmemme maka edeghari ederede Ọkachamara ọkachamara Ndị ọkachamara na-egwu Disk Macrorit Ịmepụta weebụ
Ndị ọkachamara Shingles bụ abamuru n'efu nke bụ ngwá ọrụ dị ukwuu maka ndị na-edegharị ederede mbido. Na-enye gị ohere iji tụnyere akụkụ abụọ maka ọkụ.
Onye Mmepụta: Mee Business